Ngaba uyilo lweWebhu 2.0 kufuneka lucinyiwe? | Martech Zone
Ngaba uyilo lweWebhu 2.0 kufuneka lucinyiwe?
NgeCawa, ngo-Novemba 25, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
UElliot Jay Stocks ukhupha isililo seemfazwe zabayili ... shiya imbonakalo yeWebhu 2.0 kwaye ulwe nabathengi bakho abawunyanzelayo.
QAPHELA: Qiniseka ukuba undwendwele Indawo kaElliotUyilo luyamangalisa.
Andivumelani no-Elliot ukuba kufuneka itshatyalaliswe. Ukusebenza kwicandelo lokuThengisa, uyaqonda ukuba kukho imeko yomhlambi kuyilo. Iinkampani ezinje iapile baneepokotho ezinzulu kwaye banolindelo loyilo lobuhlakani olunxulunyaniswa nophawu lwabo. Umthengi ulindele ukuba uyilo olunxulunyaniswa neemveliso zika-Apple, ukupakisha kunye nentengiso ziya kwaphula umhlaba. (Ngaphandle kweentengiso zemvelaphi emnyama kunye nokukhanya okukhanyayo kwelinye icala lesithethi… Ndicinga ukuba kubonakala kuyinto ehlekisayo).
Zonke ezinye iinkampani zikulungele ukulandela ukhokelo. Kanye njengokuba ifashoni ilandela imikhwa, kunjalo uyilo. 'Umhlambi' uyayixabisa i-aesthetics ebonisayo ebonisa ukuba inxulumene nendlela ethile okanye itekhnoloji. Xa ndifumana isicelo esitsha njenge Umxubex or rssHugger, Phambi kokuba ndide ndifake isicelo, ndibethwe ngumbono obonakalayo wokuba esi sisicelo esakhelwe kwitekhnoloji entsha.
Ubuntu kunye nobuchule zibalulekile, kodwa xa wonke umntu enxibe ijean yebhanti yomlenze kwaye ubonakalisa kwiintsimbi zentsimbi, abantu baya kuyibuza ngoko nangoko indlela oziva ngayo. Ilungile okanye ayilunganga, le yindlela yokuziphatha kwabantu. Kule mihla nakweli xesha apho abathengi behamba ngokukhawuleza ukusuka MySpace ukuba Facebook, okanye Twitter ukuba Tumblr, Kubalulekile ukuba uyilo lwakho lukhuphe ukuba wamkele eyamva ifashoni kwiwebhu.
Ndiyaluhlonipha uluvo lukaElliot njengegcisa elinetalente kunye noyilo olwahlukileyo, kodwa ndingacebisa iinkampani ukuba zingayilahli uyilo lweWebhu 2.0 okwangoku. NoElliot uyavuma ukuba kukho izizathu ezivakalayo zokulandela umhlambi. Mna no-Elliot siyavumelana ngomceli mngeni wokwenyani: Ungasebenza njani ngaphakathi kwemida yeWebhu ye-aesthetics ye-Web kwaye uphume njengowokuqala. Kwaye ukuba ujonga ukuba zeziphi izinto ezingundoqo, u-Elliot udibanise umboniso omkhulu nazo zonke ii-aesthetics ezinxulumene noyilo lweWebhu 2.0!
tags: isitokhwe se-elliot jay2 web2.0 webkuyilo web
Kuthekani ukuba iiBlogger ziqhubeke nogwayimbo?
Ndithumele nje i-1000 yeedola kuNowa!
Novemba 25, 2007 ngo-3: 50 PM
Umzekelo we-myopic kunye noyilo lokuzimela. Ndifundile iposti yakhe emva koko ndayijonga intetho yakhe elindele ukufumana ukuqonda okwenyani kodwa ndafumana iposti eshumayele kwikwayala yabaphulaphuli bakhe be-FOWD; Iqela elinee-ethos ekwabelwana ngazo lifuna ukuba nenkululeko yokuyila ngaphandle kokukhathazeka ngeenjongo zeshishini. Ngelishwa yinguqulelo yeWebhu ye-2.0 yearhente yentengiso egxile ekuphumeleleni amabhaso okuyila endaweni yokugxila ekuqhubeni ingeniso kumgca wabathengi babo.
Ndingabhatala ngakumbi kuJakob Nielsen kwaye Umthetho kaNielsen: "Abantu basebenzisa iwebhusayithi yabanye abantu amaxesha amaninzi kunaleyo yakho (ke ukwenza indawo yakho ukuba ihambelane nezinye iisayithi kuyonyusa ukusetyenziswa kwaye kungoko kukunceda ukuba ufezekise iinjongo zakho zeshishini.)
Novemba 25, 2007 ngo-3: 51 PM
Yabona, umceli mngeni kukuba uninzi lwabantu abangayiliyo benza uyilo lwabo lwesiza .. Abanye bethu bangathanda ukukwazi ukuyila indawo enje ngoMnu.
Xa uthetha nge "Web 2.0", ewe uyilo aluchazwanga, nangona kunjalo, sonke siyayiqonda inkangeleko: izinto ezimenyezelayo, imigca, imiphetho ebunjiweyo, ukubonakaliswa, kunye nokukhanya kwangaphandle… (ndicinga ukuba nazo zonke ndizigqumile!) . Ngokuqinisekileyo, wonke umntu uyatsiba ebhodini kwaye uhamba-ehamba nayo, nangona kunjalo, ukuba sijonga ezinye iindlela, sishiywe sinee-hunks ezinkulu zombala (ezinokuthi okanye zingasebenzi kunye), ukunqongophala kobunzulu, kunye neWebdings ezilusizi okanye okubi ngakumbi, ubugcisa obusikiweyo…
Inkangeleko yewebhu ye-2.0 yeyethu sonke esiqondayo ukuba asinazakhono zoyilo olulunge ngokwenene, kodwa siliqonde ixabiso lokubeka inzame kuyo ngaphandle kokutshintsha isicatshulwa kumxholo we-WordPress ongagqibekanga…
Novemba 25, 2007 ngo-9: 02 PM
Enye yezinto ezintle ze-WordPress (ok. Malunga neCSS) kukuba iyilahlula uyilo kunye nomxholo. Oko kuthetha ukuba unokukhuphela umxholo owenziwe kakuhle kwaye ungakhathazeki malunga noyilo kakhulu emva koko.
Mna okwangoku ndizama ukuhamba ngendlela encinci, kwaye ndidlala ngeenxa zonke ngomxholo ojolise kuhlobo.
Novemba 25, 2007 ngo-8: 58 PM
U-Elliot uneyona mxholo ubalaseleyo, uninzi lwengcinga yeWordPress endikhe ndayifumana. Kuyamangalisa kwaye kuyakhuthaza.
Novemba 25, 2007 ngo-9: 20 PM
Ndiyavuma, modifoo! Ndineentloni kuyilo lwam xa ndijonga enye yenziwe ngendlela eyakhe!